Mpamatsy sy Orinasa Fikarakarana Olon-dehibe |China Adult Care Manufacturers
Agent & ODM
pataloha fanofanana zazakely
pataloha fanofanana Eco
ECO Diaper Bag
Eco Urine Pad
Diaper pataloha olon-dehibe
Pants Lady Napkin
Velona Cuddles Pro Guard Diaper olon-dehibe
Mila fikarakarana azo antoka kokoa ny tsy fikojakojana.Diaper fanary karazana olon-dehibe dia vokatra natao hanamora ny fiainana ho an'ny marary sy ny mpikarakara.Ny habetsahan'ny absorption dia natao araka ny zava-misy ary mikendry ny fampiononana ary misoroka ny fivoahana amin'ny tongotra sy ny lamosina ambany.
· Mety ho an’ny anti-panahy
· Ny fibre super absorbent dia misintona rano avy hatrany
· Misoroka ny maimaika sy ny fofona.
· Ny sosona malefaka fanampiny dia manakana ny fikorianan'ny lamosina mba hahazoana fampiononana fanampiny.
· Ny takelaka ambony miaraka amin'ny Teknolojian'ny Air Trapping dia mampihena be ny mety hisian'ny fery eo am-pandriana.
· Fampandrenesana fampandrenesana fanovana ny diaper.
· Tehirizo tsara amin'ny toerany ny tadin-tsetroka fanampiny.
· Mifanaraka amin'ny injeniera mba hisorohana ny fivoahana.
BeSuper |Diaper Comjoy Adult Pull-Up
FIAROVANA MAXIMUM: COMJOY dia miaraka amin'ny Extra Absorbency Plus miaraka amin'ny elastika malefaka izay mamolavola ny vatanao mba hahazoana aina kokoa.Mifanaraka amin'ny haben'ny andilana 34 hatramin'ny 46 santimetatra.
FITONDRANA SUPER: Sarimihetsika mifoka rivotra mamela ny fikorianan'ny rivotra hanampy ny hoditra hitoetra ho mangatsiatsiaka, ary ny fonony ivelany toy ny lamba dia malefaka sy mahazo aina.
COMFORT & INNOVATION: Nandany am-polony taona maro izahay niara-niasa tamin'ny mpampiasa sy ny matihanina amin'ny fahasalamana mba hamoronana diapers ho an'ny olon-dehibe sy atin'akanjo tsy mitongilana izay manome fampiononana sy fisondrotana ary manohana ny fahasalaman'ny hoditra.
HALALANA TSARA: COMJOY dia manome fiarovana bebe kokoa, fampiononana, fahasalamana sy fahasalamana.Ny kalitao sy ny fanavaozana dia miharihary amin'ny vokatra rehetra navoaka.
vokatra asongadina, Sitemap
Famafana zazakely biodegradable organika, Diaper vao teraka, Diaper Eco kalitao avo lenta, Diaper Baby, Bamboo Liner, Mpanamboatra Diaper,
Diaper Eco kalitao avo lenta, Bamboo Liner, Famafana zazakely biodegradable organika, Diaper vao teraka, Diaper Baby, Mpanamboatra Diaper,